*Neu* - Team Management - Top Leistungen erreichen - နောက်ဆုံးရသတင်းများ 24
19.09.2018 in Bremen & မြူးနစ်
+ S က&P Test: Führungsstärke
+ S က&P Check: Hochleistungs-Teams richtig führen
+ S က&P Test: Feedback-Fähigkeit
+ S က&P Test: Delegieren Sie gerne?
မော်ကွန်းတိုက် လကိုရွေးချယ်ပါ May 2018 (474) April 2018 (722) မတ်လ 2018 (735) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 (755) ဇန္နဝါရီလ 2018 (757) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (645) နိုဝင်ဘာလ 2017 (805) အောက်တိုဘာလ 2017 (760) စက်တင်ဘာလ 2017 (674) သြဂုတ်လ 2017 (690) ဇူလိုင်လ 2017 (314) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (1)
Excel & Co. ,. für erfolgreiche Assistenten
Controlling für Office Manager – ကိုယ့်အတွက်အရေးအပါဆုံးအခြေခံ2တှေ့ဆုံ!
အဖြစ်အပျက် (70) ရှယ်ယာ (146) ဘာလင် (98) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (64) ကုန်စည်ဒိုင်-TV ကို (99) လိုက်နာခြင်း (66) ထိန်းချုပ်ခြင်း (83) ဒေတာလုံခြုံရေး (60) ဒစ်ဂျစ်တယ် (134) အဖိုးတန်သတ္ထု (79) ဘဏ္ဍာရေး (99) ခဲ (62) ခေါင်းဆောင်မှု (85) စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် (95) ငွေကြေးခဝါချမှု (64) စီမံခန့်ခွဲမှု (113) ကျန်းမာခြင်း (65) ရှေ (481) ဟမ်းဘတ် (62) ဟောင်ကောင် (72) ဟောင်ကောင်ကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်စီ (HKTDC) (72) ဟော်တယ် (63) အိမ်ခြံမြေ (63) အိုင်တီ (81) ကနေဒါ (204) ဆက်သွယ်ရေး (144) ကွေးနီ (184) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (127) ငွေဖြစ်လွယ် (70) Liquiditätssteuerung (62) စီမံခန့်ခွဲမှု (64) စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (59) မက္ကစီကို (68) မြူးနစ် (62) နီဗားဒါး (121) တည်နေရာ (57) rating (71) Rohstoff-TV ကို (85) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (118) ငှေ (381) Swiss Resource (63) ရာထူး (121) ရောင်းအား (65) စီးပွားရေးကို (64) Zink (74)